အပိုင်း ၁။ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများ (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲဖြင့်ဖော်ပြသည်)
လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ (2020) ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ယူအက်စ်စစ်တပ်နမူနာများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှု - ကဏ္Aစုံလေ့လာမှု (၂၀၂၁)
အပိုင်း ၂။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစတင်ကတည်းကမုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများကျဆင်းသွားသည်မဟုတ်လော။
မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုသောစကားကိုသင်ကြားဖူးပါသလား (porn sites များနှင့် လိုလားသူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ) "porn အသုံးပြုမှုရှိပါတယ် သိသိသာသာမုဒိမ်းမှုနှုန်းလျှော့ချ?"အဆိုအရ FBI ကဖြန့်ချိသစ်ကိုစာရင်းဇယား (အောက်တွင်ကောက်နုတ်ချက်), (လူဦးရေရဲ့ 100,000 နှုန်း) မုဒိမ်းမှုအရေအတွက်ကတဖြည်းဖြည်း 2014-2016 (stats ရရှိနိုင်နေသောများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က) မှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်မှာတော့ 138,045 လိင်ပြစ်မှုများရှိကြ၏, up 23% စက်တင်ဘာလ, 12 ရှေ့အပု 2017 လအတွင်း။
ဒါပေမယ့်အင်တာနက် porn ပေါ်ပေါက်လာကတည်းကမုဒိမ်းမှုနှုန်းကျဆင်းသွားတာမဟုတ်လား။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဟုတ်ကဲ့နှင့်အခြားသူများအတွက် အဘယ်သူမျှမ။ ကျယ်ပြန့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာရရှိမှုသည်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုရွေးချယ်ထားသည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအနည်းငယ်မှတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်သာအခြေခံသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအခန်း ၅ တွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည့်အတိုင်းဤတောင်းဆိုမှုများသည်ကွဲလွဲနေသောဒေတာနှင့်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုလျစ်လျူရှုသောကတ်ပြားများအိမ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် (လူ ဦး ရေ ၁၀၀ လျှင် ၁ ယောက်နှုန်း - မုဒိမ်းမှုနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောယူနစ်) တွင်လျော့နည်းကျဆင်းခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန်အများဆုံးဖွယ်ရှိအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စု (12-34) အသက်လူဦးရေအဖြစ်.
လေ့လာမှုများအရအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းသည်အစီရင်ခံမှုနည်းပါးကြောင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်း၌အမှန်တကယ်မြင့်တက်လာနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
နှုန်းထားများ ယူအက်စ်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများတိုးပွားလျက်ရှိသည် (Pornhub ၏အကြီးမားဆုံးအသုံးပြုသူ ၂) ။
အမှန်တကယ် porn အသုံးပြုသူများအားအကဲဖြတ်လေ့လာမှုများသည် porn နှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှု၊ ကျူးကျော်မှုနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုမှု (စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis) တို့၏ဆက်စပ်မှုကိုပြသည်။
ယူအက်စ်နှုန်းထားများ အားလုံး အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှု 1990 န်းကျင်သည်အထွတ်အထိပ်သို့, ပြီးတော့လာသောအခါအကြောင်းကို 2013, သည်အထိငြင်းဆန် မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်စတင်။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာမုဒိမ်းမှုနှုန်းသည် (ရာဇ ၀ တ်မှုအမျိုးအစားများအနက်အနည်းဆုံး) ကျဆင်းသွားပြီးအခြားသူများကမူကျဆင်းနေသည်။
အကြမ်းဖက်ရာဇ ၀ တ်မှုကျဆင်းမှုသည်လူ ဦး ရေ ၁၀၀ ကီလိုလျှင်သက်ကြီးရွယ်အိုများရာခိုင်နှုန်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ဖွယ်ရှိသည့်အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်နေသည်။ ဤလူ ဦး ရေအချိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းကို“ ပထမကမ္ဘာ” နိုင်ငံများစွာ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာ 100 ခုနှစ်လူ ဦး ရေအသက်အရွယ်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေ။ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၄၄ နှစ်အတွင်းရှိလူ ဦး ရေကိုသတိပြုပါ။
အထက်ပါလူဦးရေအချိုးအစားဆိုင်းအတွက်လျော့နည်းဘို့အကောင့်နိုင် အစီရင်ခံတင်ပြ လူ ဦး ရေ ၁၀၀K အတွက်မုဒိမ်းမှုနှုန်း၊ တကယ်တော့အတွက်နှုန်းထားများငြင်းဆန်လျှင် (အချို့ကျွမ်းကျင်သူများကအငြင်းပွားနေတဲ့ပြောဆိုချက်ကို) ။ သုတေသီ နီးလ် Malamuth အဓိကလိင်စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး မှ Milton Diamond ၏ရက်စွဲပါစာတမ်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် (အချို့သောလိင်ပညာရှင်များကသူတို့၏မဆင်မခြင်ပြောဆိုမှုများကိုသက်သေပြကြသည်)
စုစုပေါင်းပြIssueနာ - အလိုလိုသိသည်မှာမီဒီယာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသော“ အောက်ခြေလိုင်း” သည်“ အမှန်တကယ်ကမ္ဘာ” တွင် (ဥပမာအကြမ်းဖက်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှု) တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာဖြစ်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြproblemsနာတွေကကြီးကျယ်ပြီးစုစုပေါင်းဒေတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမဆိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးနိဂုံးချုပ်သက်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ ဥပမာ၊ အောက်ပါအသင်းအဖွဲ့ကိုစဉ်းစားပါ - ယူအက်စ်ရှိသေနတ်အရေအတွက်နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်း။
နောက်ဆောင်းပါး Pew တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း - တစ်ဝက်ကျော်အတိတ် 20 နှစ်များအတွင်းလူသတ်မှုနှုန်းဖြတ် (နယူးဂွန်ပိုင်ဆိုင်မှုမြင့်တက်နေစဉ်) လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းအမေရိကန်၌သေနတ်များသိသိသာသာများပြားလာသည်နှင့်အမျှလူသတ်မှုနှုန်းမှာသိသိသာသာကျဆင်းလာသည်။ သေနတ်များကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်မှုသည်အမှန်တကယ်အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသတ်မှုလျှော့ချရေးကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်ဟုအချို့သောကျွန်ုပ်တို့ကမည်သို့ကောက်ချက်ချရန်ဆန္ဒရှိကြသနည်း၊ အချို့သူများသည်နိဂုံးချုပ်လျင်မြန်လိမ့်မည်။ Drew Kingston နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤစုစုပေါင်းပြissueနာကိုအောက်ပါအတိုင်းပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဆွေးနွေးကြသည်။ Aggregate ဒေတာနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် (2010) ၏လေ့လာမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ၏အရေးပါမှုနှင့်အတူပြဿနာများ.
ထို့အပွငျလူသိများရာဇဝတ်မှုများ၏နှုန်းထားများ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ဆနျးစစျဖို့သာ "မှီခို variable ကို" မည်မဟုတ်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှုန်းသည်အတော်အတန်နည်းပါးသော်လည်း (ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်ကကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနည်းပါးမှုသည်ညအချိန်တွင်လုံခြုံမှုရှိသောလမ်းလျှောက်လမ်းများကိုအမျိုးသမီးများကခံစားခဲ့ရကြောင်း) သော်လည်းတစ်နေ့တည်းတွင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခံရသည့်မုဒိမ်းမှုသည်တစ်နေ့တည်းတွင်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် အမျိုးသားများ (တရုတ်နိုင်ငံနန်ကင်းမြို့မှ) ။ ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုခွင့်ပြုလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အလားအလာကောင်းများကိုထင်ရှားပေါ်လွင်ထင်ရှားလာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်သောအပြုအမူများနှင့်သဘောထားများ (ဥပမာ - ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်အထူးမီးရထားကားများ) ကိုအမျိုးသားများအကျင့်ကိုကျင့်ရန်တိုက်ဖျက်ရန်အမျိုးသမီးများအတွက်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ sexology စာရင်း - အစေခံဆွေးနွေးမှုဆက်ပြောသည်။ စိန်၏လေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Neil Malamuth ပြောခဲ့သည့်အရာမှာ“ You Wrote” သည်မေးခွန်းဖြစ်သည်၊ တုံ့ပြန်မှုသည် Malamuth ဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပြစ်မှု: ငါလူအတော်များများဟာဆက်စပ်မှုတိုင်းပြည်ကျယ်ပြန့်သုတေသန porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုကိုပြသထားပါတယ်သောအထင်အမြင်ရှိပုံပေါ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤမှာအားလုံးမှန်သည်မယုံကြည်ကြဘူး။ အကယ်၍ သင်သည် Milton Diamond ၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါကကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်မုဒိမ်းမှုကြားခွဲခြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပိုမိုရရှိလာသည်နှင့်အမျှအနိမ့်ဆုံးလျော့နည်းသွားခြင်း (တိုးပွားလာခြင်းမရှိခြင်း) မှာထင်ရှားသည်။ ထို့အပြင်အနည်းဆုံးအကျယ်အ ၀ န်းရှိသည့်နိုင်ငံများတွင်ဥပမာနှစ်ခုရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ နှစ်ခုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်. ဥပမာအားဖြင့်, ကြောင်းညွှန်ပြအဲဒီမှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လည်းမရှိ,
#3- ဤကာလအတွင်းပင်မုဒိမ်းမှုနှုန်းတိုးလာကြောင်းနိုင်ငံများစွာကအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်စပိန်နှင့်နော်ဝေးမှလေ့လာမှုများက Diamond ၏စွပ်စွဲချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သောတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြသည်။ (လိင်မှုဗေဒပညာရှင်များကလိင်တူချစ်သူများသည်အဓမ္မပြုကျင့်မှုကိုလျှော့ချသည်ဟုပြောဆိုခြင်းအားထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရန်)
#4 - ၏နှုန်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအမေရိကန်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထ (Pornhub ရဲ့နှစ်ခု အကြီးမားဆုံးအသုံးပြုသူများ)
# ၅ –Porn porn အသုံးပြုသူများကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများသည် porn နှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ကျူးကျော်မှုနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုမှု (စာပေနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) အကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသည်။
ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံများအတွက်သံသယဖြစ်ဖွယ်စုစည်းထားသည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်မည့်အစားသက်ဆိုင်ရာ variable များကိုထိန်းချုပ်သောအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများကိုလေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
အလားအလာသြဇာဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်, မိဘ၏ဇနီးယောင်္ကျားအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းစေရန်လက်ရှိထိတွေ့မှုမှကြိုတင်ထိတွေ့မှုတစ်ခုချင်းစီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် SV ကျူးလွန်-ကြိုးစားခဲ့မုဒိမ်းမှုပေါ်ပေါက်လာအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းများအတွက်ချွင်းချက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိရန်လိုသည့်အပြုအမူသည်အဓမ္မပြုကျင့်မှုမှအပပထမ SV ကျူးလွန်မှုအားလုံးတွင်သိသာထင်ရှားသည်။ ယခင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်ယခင်ကဆက်ဆံရေးတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကိုသားကောင်ခြင်းသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော်ငြားပထမ ဦး ဆုံး SV ကျူးလွန်မှုကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား SV ရောဂါအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုဤ longitudinal လေ့လာမှုတွင် တွေ့ရှိချက်များကိုပစ်မှတ်ထားခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအများအပြားပျော့အချက်များ, လူငယ်များသည် '' အိမ်တွေမှာကြမ်းတမ်းမိဘများကလုပ်ပါတယ်နှင့်လည်းအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်အားဖြည့်လျက်ရှိကြောင်းကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြမ်းဖက်မှုများအထူးသဖြင့် script များအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှု / ကျူးကျော်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုအဓိကလိင်ဆိုင်ရာဗေဒင်မှအခြားပို့စ်တစ်ခုဖြင့်နိဂုံးချုပ်သည်။ သင်မြင်ရမည့်အတိုင်း၊ စာရေးသူသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်တူချစ်သူ (နှင့် PhD sex သုတေသီ) ဖြစ်သည်။
… .. ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့်၎င်းတို့မှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောနေတာကသူတို့လိုပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့မြင်ချင်သောအရာကိုသာတွေ့မြင်ရန်အချို့သောခိုင်မာသောအတည်ပြုမှုဘက်လိုက်မှုအချို့ကိုအသုံးပြုနေပုံရသည်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအထောက်အထားများကိုမျက်ကွယ်ပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားရှာဖွေသူများ၏ရည်မှန်းချက်ကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းဖြစ်သည်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းမဟုတ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားကိုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပြောင်းလဲမှုအပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။
အစွန်းရောက်အနေအထားကိုယူခြင်းအားဖြင့် (“ မည်သည့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်သည်မည်သူ့ကိုမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ”) သက်သေအထောက်အထားများမှထောက်ခံခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုသက်ဆိုင်မှုနည်းပါးစေသည်။ အခြားအစွန်းရောက်သောအနေအထား (“ ညစ်ညမ်းမှုအားလုံးသည်ကြည့်ရှုသူတိုင်း၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုကိုတိုးပွားစေသည်”) ။
မှတ်စုဖြေ - YBOP ကဒီစာမျက်နှာကိုသုတေသနလုပ်တယ် realyourbrainonporn.com ဒါခေါ် "သုတေသနစာမျက်နှာ။ " porn- စက်မှုလုပ်ငန်း shill စစ်မှန်သောyourbrainonporn လက်ဆောင်ပေးမယ် ချယ်ရီကောက်ယူမကြာခဏဆီလျှော်စာတမ်းများလက်တဆုပ်စာ (များစွာသောအမှန်တကယ်လေ့လာမှုများမဟုတ်), သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်။ အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤ link များသည် RealYBOP ၏သုတေသနစာမျက်နှာများနှင့်“ ကဏ္ ”များ” ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်နှံ့အောင်လုပ်သည်။